2021 35W@94: Downtown to Crosstown (Somali)
35W@94: Faras Magaalada (Downtown) loona socdo Crosstown
Sahanka Ka Qeybgalka Mashruuca
Waxaanu idinkaga mahad celineynaa waqtiga aad kaga qeyb qaadateen buuxinta 35W@94 ee sanadlaha ah: Ka qeybgalka sahanka mashruuca ka taga Faras Magaalada (Downtown) loona socdo Crosstown Ra’yiga aad ka dhiibataan waxaa loo adeegsanayaa inuu siiyo macluumaad shaqaalaha mashruuca, iyo sidoo kale mashaariicda mustaqbalka ee MnDOT.
Tixraac yar ka hor inta aadan ka qeyb qaadan sahanka: 35W@94 waa 2.5 meyl ee I-35W inta u dhaxeysa wadada 43aad iyo 15aad ee Minneapolis. Arag khariidada hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Su’aalaha horudhaca ah: Xilligeeayaad moodaa inuu ugu dheer yahay MN?
Qeybta 1aadFahamka Mashruuca
Waxaa ilaa hadda lagu sameeyey todoba faa’iido oo isbedel weyn ah wadada taasoo qeyb ka ah mashruuca. Ka dooro shaashada soo socota oo nagu caawi in aad fahano inta aad kala socoto isbedelkaas lagu sameeyey adiga oo dooranaya “Haa, waan ogsoonaa” ama “Maya, ma aanan ogsooneyn" mid kasta.
Faa’iidada 1: Ma ogsooneyd?
In la bilaabay dhismaha Khadka tareenka ee Orange ee wadada Lake iyo I-35W:
Haa, waan ogsoonaa tan Maya ma aanan ogsooneyn tan
Xogta dhabta ah: Khadka Orange Line waxa uu marayaa xaruntan 10kii daqiiqo ee kasta saacadaha gaadiidku badan yahay iyo 15kii daqiiqaba hal mar xilliga aanu gaadiidku badneyn. ur.
700 oo bus ayaa halkaas joogsanaya maalin kasta.
100 bus oo u socda faras magaalaha ayaa joogsanaya halkaas xilliga gaadiidku badan yahay.
7 daqiiqo ayey qaadaneysaa in lagu gaaro faras magaalada.
Faa’iidada 2: Ma ogsooneyd?
Gaadiidku waxa ay mari karaan khad ka baxa waqooyi I-35W oo kugu daraya I-94?
Xogta dhabta ah: Khad u gaar ah gaadiidka oo lagu daray waxa ay yareyneysaa isku xiranka iyada oo caawineysa nabadgelyada. Waxa kale oo la heli karaa MnPASS. Gaadiidka oo dhan way mari karaan khadkaas xilliyada ka baxsan saacadaha shaqada ee gaadiidku badan yahay.
Faa’iidada 3: Ma ogsooneyd?
Horumarinta goobaha laga talaabo iyo kuwa ay maraan dadka lugeynaya iyo bushkuleetiyada, oo ay ka mid tahay in laga dhigay kuwo balaaran oo la dhisay buundo ay dadku ka talaabi karaan?
Xogta dhabta ah: Buundadii ugu da’da weyneyd ee wadada 24aad ma aheyn mid ku wanaagsan in dadku ku dul socdaan oo ay ka dagaan jaranjarada ama qaadaan bushkuleetiyada oo la dul maraan.
Waxyaabaha ay ku wanaangsan tahay buundada cusub ee laga dhisay wadada 24aad iyo 40aad waxaa ka mid ah:
In si fudud lagu gaari karo
Balaceedu yahay 14' oo labada dhinac ah.
Gacan qabsi qurux badan
Nalal ku wareegsan bundada oo dhan
Ka gaaban qiyaastii 20’
Faa’iidada 4: Ma ogsooneyd?
Waxa ay yareyneynaa isku xiranka gaadiidka iyada oo loo sameeyey khadka MnPass?
Xogta dhabta ah: Khadka MnPass waa kuwo lagu kalsoonaan karo, yareeya isku xiranka gaadiidka saacadaha shaqada ee gaadiidku badan yahay. Khadkan degdeggan ah waa mid loogu talo galay in ay maraan gaadiidka dadweynaha, mootooyinka, iyo gaadiidka ay saaran yihiin laba qof iyo wixii ka badan oo lacag la’aan ah.
Faa’iidada 5: Ma ogsooneyd?
Goob gaadiidka la dhigto oo lagu magacaabo Green Crescent ayaa la dhisay kaasoo ku xiraya Midtown Greenway xarunta laga raaco gaadiidka ee Wadada Lake.
Xogta dhabta ah: Xarunta Green Crescent waxa ay hal looto ku dhereran greenspace. Tan waxaa la furayaa 2021 waxaana ka mid ah farshaxanka dadweynaha, kuraas iyo nalal ay ku socon karaan dadka lugeynaya iyo bushkuleetiyada.
Faa’iidada 6: Ma ogsooneyd?
Horumarinta Wadada Lake (laami cusub, waddo lugeed cusub, iwm) ayaa iminka socota?
Xogta dhabta ah: Horumarintan waxa ay Wadada Lake ka dhigayaan mid la taaban karo, sare loogu qaaday amaanka, iyo waddo ay wada mari karaan gaadiidka iyo dadka lugeynaya.
Faa’iidada 7: Ma ogsooneyd?
Waddo cusub oo ka baxda I-35W koonfur ee Wadada Lake iyo I-35 waqooyi ee wadada 28aad oo la dhisay?
Xogta dhabta ah: Marka la furo wadooyinkaas 2021 waxa ay fududeynayaan gaaritaanka goobaha ganacsiga ee halkaas ku dhowdhow.
Ka dib marka aad aragtay todobada faa’iido ee mashruucan, yaad is leedahay way ka faa’iideysanayaan horumarintaas? *
Dadka degan agagaarka wadada ayaa ka faa’iideysanaya Dadka mara wadada ayaa ka faa’iideysanaya Dadka ku safra agagaarka xaafadahaas ayaa ka faa’iideysanaya Cidna Ma hubo Kuwo kale
Odhaahyada soo socda midee ayaad si aad ugu raacsan tahay? *
Waxa aan aaminsahay faa’iidada mashruuca ayaa ka badan saameynta dhismaha. Waxa aan aaminsanahay saameynta iyo faa’iidada laga helayo in ay yihiin kuwo siman. Waxa aan aaminsanahay in dhibaatada dhismaha ay ka badan tahay faa’iidada laga helayo.
Qeybta 2aadKa qeyb gelinta bulshada
Dadaaalka Ka Qeyb Gelinta
Sanadkii la soo dhaafay oo dhan, MnDOT waxa ay qabatay kulamo kala duwan ee ka qeyb gelinta bulshada (fool ka fool COVID-19 ka hor iyo internetka) oo lagu soo bandhigay mashruuca 35W@94. Tusaale ahaan kulamadaas waxaa ka mid ahaa:
Habeenka kediska (sawirka, ka hor COVID-19)
Somali Radio su’aalo iyo jawaabo (sawirka, ka hor COVID-19)
Ma ka qeyb qaadatay mid ka mid ah 35W@94: Mashruuca faras magaalada (Downtown) loona socdo Crosstown *
Haa Maya Ma aanan ogsooneyn in ay jiraan kulamo looga hadlayo mashruuca
Kulankee (kulamadee) ayaad ka qeyb qaadatay?
Sidee ayaa ku ogaatay kulanka (kulamada) aad ka qeyb gashay? Goobaabin geli dhamaan inta ku khuseysa.
Facebook MnDOT GovDelivery Bogga mashruuca 35W@94 Baraha bulshada ee kale Wargeyska degaanka Kooxaha xaafadaha Warsidaha gudiga magaalada
Sidee ayaad jeclaan laheyd in aad kula socoto kulamadaaas? Goobaabin geli dhamaan inta ku khuseysa.
Ma daneyneysaa in aad ka qeyb qaadato kulamada noocan oo kale ah (internetka ama fool ka fool) mustqbalka? *
Ma jeclaan laheyd in laguu soo diro iimeyl ku saabsan kulamadaas?
Iimeylkaaga noo dhaaf
Ma dareemeysaa in MnDOT wargelisay bulshadaada - fool ka fool (ka hor COVID-19) ama barta internetka - hababka kala duwan ee bulshada lagaga qeyb gelinayo mashruuca? *
Haa Maya Anigu ma ogsooni dadaal bulshada lagaga qeyb gelinayo mashruucan.
Ma jiraan wax fikrado ah oo aad ka dhiibineyso horumarinta ka qeyb gelinta bulshadaada ee mashruuca?
Mashruucu waxa uu ku dhow yahay dhamaad! Wax ra’yi ah kama dhiibaneysaa sida loogu dabaaldegayo?
Qeybta 3aad Xiriirka Barta Internetka
Booqasho Aad Hogaamineyso
Waxaa la dhaqan geliyey booqasho qofku is hogaaminayo ee meelo kala duwan ee bulashada ah. Goob kasta waxaa lagu soo bandhigay mashruuca, taariikhda iyo bilowgii hore, iyo adeeg dheeraad ah oo lagaga qeyb gelinayo.
Marna ma isku dayday in aad kaga qeyb gasho bata internetka ama aad booqato mid ah ka mid ah goobaha lagu soo bandhigay mashruuca? *
Soo booqo barta internetka ee booqashada aad hogaamineyso! (https://tour.35wat94.com)
Ma jeclaan laheyd mid taas oo kale ah lagu qabto xaafadaada?
Fadlan noo dhaaf magaca xaafadaada/halka ay ku taalo.
Waxyaabaha Lagu Qoro Bogga Mashruuca
Tan iyo bilowgii mashruuca, waxa aanu abuurnay oo aan ku qornay bogga mashruuca ilaa 50 jeer xogtii ugu dambeysay mashruuca ee halka uu marayo dhismaha, kulamada bulshada iyo wacyi gelinta dugsiyada ee bogga mashruuca 35W@94 (http://blog.35wat94.com).
Halkan ka akhriso waxyaabihii ugu dambeeyey ee lagu qoray:
Ma akhrisay bogga mashruuca? *
Waa maxay mowduucyada aad jeclaan laheyd in lagu soo daro mustaqbalka 35W@94?
Gunaanad:Fadlan naftaada wax nooga sheeg
Khasab ma aha
Xagee degan tahay?
Magacoow xaafadda aad degan tahay?
Waa xagee duleedka magaalooyinka mataanaha ah ee aad degan tahay?
Sidee ayaad u isticmaashaa wadada I-35 inta u dhaxeysa faras magaalaha Minneapolis iyo wadada 46aad? Goobaabin geli dhamaan inta ku khuseysa. *
Waxa aan ku leeyahay ganacsi Waan ag deganahay Waxa aan ku gaaraa oo kaga soo noqdaa goobta shaqada. Waxa aan u maraa waxyaabo shaqada la xiriira. Waxa aan raacaa bas ama aan ku dhawahay I-35W. Wadooyinka ku dhaw dhaw ayaan ku lugeyaa/bushkuleeti ku maraa Mashruucan wax saameyn ah iguma laha
Su’aalaha soo socda waxa ay naga caawinayaan in aan xaqiijino in sahankan ay ka qeyb qaateen qeybaha kala duwanm ee bulshada.
Qowmiyaddee ayaad isku tirisaa? Goobaabin geli dhamaan inta ku khuseysa.
Ameerikaan Indiyaan ama u dhashay Alaska Eeshiyaan Modow ama Afrikaan Ameerikaan ah Hisbaanik ama Laatiino U dhashay Haaway ama Jasiiradaha kale ee baasifigga Caddaan
Da’dee ayaad ku tirsan tahay?
55 - 18 sano jir 18 - 30 sano jir 31 - 45 sano jir 46 - 64 sano jir Ka weyn 65 sano jir